Porn စွဲလမ်းနေသလား။ သတင်းစာဆရာ Diana Davison မှ ၆ မိနစ်ဗီဒီယို - သင်၏ Brain On Porn
Porn စွဲလမ်းနေသလား။ ဂျာနယ်လစ် Diana Davison မှ6မိနစ်ဗီဒီယို
အားဖြင့်6မိနစ်ဗီဒီယို ဂျာနယ်လစ် Diana Davisonရေးသားသူ The Post Millennial နီကိုးလ် Prause အပေါ် '' ဖော်ထုတ်.
Diana Davison ဗွီဒီယိုသည် Prause ၏ဖြစ်ရပ်များကိုကြာရှည်စွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောအဖြစ်အပျက်များကိုအချိတ်အဆက်တစ်ခုပေးခဲ့သည်7နှစ်ကမ်ပိန်း ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များ၊VSS ပညာရေးစစ်ပွဲအချိန်ဇယား။ " Update ကို - ချီးမွမ်းခြင်း အချိန်ဇယားကိုဖယ်ရှားတယ်။ Hmm …ဆက်စပ် - နီကိုးလ် Prause ၏မဖွယ်မရာသတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းခံရသူများ (PDF).
t ကိုအောက်မှာအလွန်ထုတ်ဖော်မှတ်ချက်များသူ Diana Davison ဗီဒီယို (စွဲလမ်းမှုမှတ်ချက်ပေးသူကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်)
Diana Davison's ကိုတုန့်ပြန်သည် အနှစ်တစ်ထောင် Post ဖော်ထုတ် ' Davison ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် / အသရေဖျက်ခြင်းအားဖြင့်နောက်မှအတုအယောင်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် Desist အက္ခရာဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုမတင်ရန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
သူမသည်အခြားသတင်းထောက်များနှင့်အတူပြုသကဲ့သို့ Belinda Luscombe, မေီ Fleming ကDiana Davison အားခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် Prause သည် Davison ကိုပို့ခဲ့သည် The Post Millennialaအခြေအမြစ်မရှိအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်စာကိုရပ်တန့်။ (အတုအယောင် C & D စာတစ်စောင်၏ PDF ကို) ။ သူမဆောင်းပါးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် Diana Davison ၏ပထမဆုံးတွစ်တာမှစတင်သည်။
No Nut နို ၀ င်ဘာလတွင်“ fap သို့မဟုတ် to fap to?” ဟူသောမေးခွန်းသည်တရားဝင်အန္တရာယ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ https://t.co/Oc0AN6DmJx #NoFap #NoNutNovember
- Diana Davison (@ d2davison) နိုဝင်ဘာလ 21, 2019
Davison အား Prause ၏တရားရုံးတွင်အမှုဖွင့်အကြောင်းမေးခဲ့သည် သူမက porn ဆုတွေဘယ်တော့မှမတက်ခဲ့ဘူး။ (ဒီကိုကြည့်ပါ ၂၀၁၆ X-Rated ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ (XRCO) ၏ဆုအခမ်းအနားတွင်အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ (ညာဘက်) ၏ပုံရိပ်။ ) Davison က Prause ကိုသူမရဲ့ Hilton v မှာမတရားဖမ်းဆီးနေသည်ဟုဖော်ထုတ်သည်။
ထို့နောက် Prause ကသူမအား Prause ၏တွစ်တာများကိုမတုံ့ပြန်ရန် Davison ကိုပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းဆုများထဲမှ "ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသော" စားပွဲတစ်ခုတွင်သူမအားပြသည့်အပိုဓာတ်ပုံ - ဒါကအခြားအနီရောင်ကော်ဇောဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။https://t.co/SPwKCaZte2
Davison ပြောသမျှကိုထောက်ပံ့ပေးသည့် screenshots များ:
2016 တက်ရောက်ခဲ့သည် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ (XRCO) ဆုအခမ်းအနား (PDF ကို: XRCO 2016)
သူမသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် AVN သို့တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း (PDF ကို: AVN 2015)
သူမ 2019 ခုနှစ်တွင် AVN တက်ရောက်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် (PDF ကို: AVN 2019)
Davison ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အတူ, Prause သူမ၏ tirade စတင်သည်:
Prause သို့ AVN အီးမေးလ်ကိုနိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့စွဲဖြင့်တိုက်ဆိုင်မှုသည်တိုက်ဆိုင်မှုလား The Post Millennial နီကိုးလ် Prause အပေါ် '' ဖော်ထုတ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ? ဤသည် Prause AVN နှင့်သူတို့အီးမေးလ်ပို့ရန်ကြောင်းအကြံပြုထားသည် ချက်ချင်း တောင်းဆိုထားသောကြေညာချက်နှင့်အတူတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Prause နှင့် AVN တို့၏ဆက်နွှယ်သောဆက်ဆံရေးရှိပုံရသည်။
သို့သော်၊ AVN အီးမေးလ်က Prause ၏တောင်းဆိုချက်များကိုမထောက်ခံပါ။ ပထမ ဦး စွာ AVN ၏အီးမေးလ်သည် 2019 နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ သို့သော် Don Hilton က Prause ကသူမသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် AVN သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုသာဆိုခဲ့သည် (သူမ 2015 ခုနှစ်တွင် tweet ကိုပြု၏) ။ ဒုတိယအချက်မှာ AVN respnse သည် RSVP လက်မှတ်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်၊ အထွေထွေဝန်ခံချက်မဟုတ်ပါ။ AVN အီးမေးလ်ကသက်သေပြနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ AVN သည် Prause ၏ beck နှင့်ခေါ်ဆိုမှုဖြစ်သည်။
ဤစာမျက်နှာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျခြိမ်းခြောက်သောစခရင်ရိုက်ကူးမှုများနှင့်အတူ၊ နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း သူမဖမ်းမိခဲ့တဲ့အပိုင်းကိုသင်တွေ့နိုင်တယ် သူမ၏တွစ်တာ ဒီမှာ: နီကိုးလ် Prause porn စက်မှုလုပ်ငန်းဆုတက်ရောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ (XRCO, AVN)
နောက်သူမ ဒီကျောက်မျက် tweets (သူမ၏ပုဂ္ဂလိကအီးမေးလ်များကိုညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းထည့်သွင်းထားသည်)
အထက်ပါတွစ်တာမှ Prause သို့ XRCO ဥက္ကChairman္ဌ၏အီးမေးလ်၏မျက်နှာပြင်ပုံသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။
Bob Krott က Prause သည် XRCO သို့တက်ရောက်ခဲ့သည် (အတည်ပြုသည်။ )Nikky ရဲ့ကျမ်းကျိန်လွှာဆန့်ကျင်), သို့သော်သူမသူမညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း "၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု" ဟုတ်မဟုတ်သူမသေချာဘူး။ Prause ၏တွစ်တာတွင် Davison tweet ၏ဒုတိယမျက်နှာပြင်ပါရှိသည်။
Davison သည် XRCO ၏ပုံကို Prause ၏ရုပ်ပုံကိုရည်ညွှန်း။ ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းမိတ်ဆွေများနှင့်အတူရှိနေသည် (porn ကြယ်ပွင့်နောက်ကွယ်မှဆံပင်ရွှေရောင် Melissa Hill)
ထိုတူညီသောအရာ၌, 2019 AVN (2015 ထက်) အကြောင်းကို ranting နှင့် (Las Vegas မှာကျင်းပသော) 2019 AVN စဉ်အတွင်းသူမ LA က၌ရှိ၏ပြသလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ tweeting ။ သို့သော် Prause သည် (၂၀၁၉ AVN) ဆုကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုမည်သူမျှမပြောကြားခဲ့ပါ တစ်ချိန်က AVN သို့တက်ရောက်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်), နှင့် အဆိုပါ အနှစ်တစ်ထောင် Post ဆောင်းပါး အဆိုပါ AVN သို့မဟုတ် XRCO ဆုဖြစ်စေအကြောင်းကိုဘာမျှမကပြောသည်။
Prause တစ် ဦး တရားစွဲဆိုမှုခြိမ်းခြောက်မှဆိုးရွားလာ။ သူမရဲ့ "သက်သေအထောက်အထား" ဘယ်သူမှဒိုင်ယာနာ Davison ကတွစ်တာဘာမှ။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းသူမ သူမရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာရှိတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအားလုံးကိုတွစ်တာ။ သံသယဖြစ်စရာအရာမရှိ၊
Davison သည်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရပြီးနောက်တုန့်ပြန်သည်။ ထို့နောက် Prause ကနှောင့်ယှက်သည်။
တွစ်တာကသင့်ကိုဘာကြောင့်ခွင့်ပြုပေးတာလဲ။ ကျွန်တော့်မှာ nutter (နီကိုးလ်ပရာယပ်စ်) ကကျွန်တော့်ကို (အံ့အားသင့်စရာ၊ အံ့အားသင့်စရာ) မှားယွင်းစွာစွပ်စွဲပြီးအခြားလူများကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြောဖို့လိုတယ်
သူမသည်သူမကဲ့သို့ ... ငါ့ကိုနောက်ယောင်ခံတူသောဒါဟာပုံရသည် 🤪
နိုဝင်ဘာလ 25, 2019:
နောက်တစ်နေ့ Prause သူမ၏ရရှိသွားတဲ့ Backpage.com တစ် ဦး ပေးပို့ဖို့ရှေ့နေ အတုအယောင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်စာကိုရပ်တန့် Davison နှင့် The Post Millennial။ Prause ၏စွပ်စွဲချက်အမှားများအားလုံးသည်ပုံမှန်မဟုတ်သည့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်သည်။
ဒီအထဲက Check: Prause ၏ဥပဒေရေးရာအကြံပေးသည်ကာကွယ်ပေးသောအဓိကရှေ့နေတစ် ဦး ဖြစ်သည့် Wayne B. Giampietro ဖြစ်သည် backpage.com။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရကလူကုန်ကူးခြင်းနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုတမင်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့် backpage ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည် (USA Today ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ ) Backpage တည်ထောင်သူများထံမှလိင်လူကုန်ကူးမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ 93-count စွဲချက်တင်) ။ စွဲချက်တင်မှုကဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပြည့်တန်ဆာပြစ်မှုများကိုသိသိသာသာလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက် backpage ပိုင်ရှင်များနှင့်အခြားသူများအားတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များကလူကုန်ကူးခံရသူအချို့သည်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများပါ ၀ င်သည်ဟုပြောဆိုကြသည်။ Giampietro ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ။ https://dockets.justia.com/docket/illinois/ilndce/1:2017cv05081/341956. ဖြစ်ရပ်များ၏ထူးဆန်းအလှည့်၌, backpage.com ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအရီဇိုးနားမှသိမ်းယူခဲ့သည်။ နှင့် ဝိန်းခ Giampietro LLC $ 100,000 လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးအဖြစ်စာရင်းဝင်.
Davison၊ The Post Millennial နှင့်အခြားတွစ်တာအကောင့်နှစ်ခုကိုဆန့်ကျင်။ ဆက်လက်ခြိမ်းခြောက်နေသည် (မှတ်ချက် - Prause သည် Davison ကိုပိတ်ဆို့ထားသည်)
Prause ၏ C&D စာတွင်“ RE: Brain On Porn” ဟုမည်သို့ဖော်ပြထားသည်ကိုသတိပြုပါ။ သူမသည်ရှေ့နေမဟုတ်ဘဲ C & D အတုအယောင်စာရေးဆရာဖြစ်ပုံရသည်။
Diana Davison သည် Prause ၏နှောင့်ယှက်မှုနှင့်အတုအယောင် C&D စာကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
Diana က Prause ကဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ တောင်းရုံနှင့်သွားပြီးထွက်သွားရန်ပြောခဲ့သည်။
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ $ 10K ဝယ်လိုအားဟာငွေညှစ်ဖို့ကြိုးစားတာပါ။
- Diana Davison (@ d2davison) နိုဝင်ဘာလ 26, 2019
ချီးမွမ်းပါ အခြားသူများကိုခြိမ်းခြောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ် Davison ချည်ထဲမှာ:
ဒါကဥပဒေမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ကို DMs နဲ့ဆက်သွယ်သင့်တယ်
အခြားအကောင့်များက Davison ၏ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းစျေးများ၏နည်းလမ်းများကိုပညာပေးသည်။
သူမနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ စစ်တမ်းက ... Unhinged!
Davison ကို Prause ကခြိမ်းခြောက်ခြင်းမရှိပါ
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောဖို့အတုအယောင်တရားစွဲဆိုမှုကိုခံရမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ဒီခြိမ်းခြောက်မှုကိုထုတ်ပေးတဲ့လူအတွက် - ကျွန်ုပ်မှာ LA ရှေ့နေတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ဤကြိုးပမ်းမှုမှာဆက်လုပ်နေလျှင်သင်သူ့ကိုမှကြားနာလိမ့်မည်။
မင်းရဲ့မေးခွန်းရဲ့ပြisနာကအသရေဖျက်မှုကိုစွပ်စွဲတဲ့သူကငါမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ငါပြောခဲ့တာကလူတစ်ယောက်ဟာဓာတ်ပုံတွေသူမကသက်သေပြတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်။ သူမကငါစိတ်မ ၀ င်စားသည့်အခြားတစ်နေရာရာဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ 26, 2019:
အမှန်ပင်ထူးဆန်းတဲ့တစ်နှစ်။ ငါသည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြု။ သင်၏နိဂုံးချုပ်နှင့်အတူသဘောတူပေမယ့်သင့်ရဲ့အခြားထုတ်ပြန်ချက်အချို့အပေါ်သဘောမတူ။ သဘောထားကွဲလွဲမှုကအသရေဖျက်တာမဟုတ်ဘူးလား။ ဤအတောအတွင်း Prause သည်အမှန်တရားကိုဖော်ပြသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုတရားစွဲရန်ခြိမ်းခြောက်နေသည်။ နို ၀ င်ဘာလတွင်သူမဟာအကြီးမားဆုံးအခွံမာသီးပါ။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် "အမှန်တရားကိုဖော်ပြခြင်း" လို့ပြောရင်သူမကသူမရဲ့ရုပ်ပုံကိုသူမအတွက်ညစ်ညမ်းတဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုအတွက်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်တရားစွဲဆိုလိုတာကိုဆိုလိုတာပါ။
ဒီဇင်ဘာလ 19, 2019: Prause သည် Tiki-Toki.com အား Davison ၏ Prause ၏အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုဆိုင်ရာအချိန်ကာလကိုဖြိုခွဲရန်ကြောက်လန့်နေပုံရသည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ငါအခုတရားစွဲမှုမှာအနိုင်ကျင့်ခံရဖို့ကျမ်းကျိန်လွှာလုပ်သင့်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ Prause သည်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ဇယားဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှဖယ်ရှားပစ်လိုက်ကြောင်းအသိပေးချက်ကိုရပြီးသူမအားသူမ၏ဆိုးဝါးသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
- Diana Davison (@ d2davison) ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2019
မှတ်ချက် - လများကုန်လွန်ပြီးပြီ Davison အနှစ်တစ်ထောင် Post ဆောင်းပါးနေဆဲဖြစ်သည်Davison ရဲ့တွစ်တာတွေလိုပဲ။ Prause မှပို။ အချည်းနှီးဖြစ်သောထိန်းချုပ်မှုမရှိသောခြိမ်းခြောက်မှုများ။
မတ်လ 10, 2020: Diana Davison သည် Prause ၏သားကောင်များမှအီးမေးလ်များလက်ခံရရှိသည်မှာထင်ရှားသည်။ ဘယ်တော့မှမပြီးတော့ဘူး
Nicole Prause သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ပြင်းထန်သောတရားစီရင်ခြင်းကိုကြေငြာနိုင်သနည်း။ ငါသူမကသူတို့ကိုတရားစွဲဆို ... ဟုသူမကများစွာသောလူများထံမှမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ဖန်သားပြင်လာပြီ ... သူမမ။ သူမတတ်နိုင်တာကိုသူသိလို့ပဲ။
- Diana Davison (@ d2davison) မတ်လ 10, 2020
Hmm ။ ပစ်မှတ်ကမင်းကိုကြောက်နေပြီလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ငါသူမကိုမကြောက်ဘူး သူမသည်ထို့နောက်သူကခြိမ်းခြောက်ပြီးတော့သူကတံခါးခုံကိုဖြည့်ဆည်းမယ်လို့မထင်ကြဘူးခြိမ်းခြောက် ပြီးတော့သူမဟာခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုနောက်ဆက်တွဲပြန့်ပွားစေသလိုမျိုး။
ကျွန်တော်သဘောမတူပါ။ ငါမကြာသေးခင်ကငါတရားစွဲဆိုမှုများ၏ခြိမ်းခြောက်မှုအမှန်တကယ်တရားနှင့်ညီမျှသည်ဟုမှတ်ယူခဲ့သည်သည့် anti-SLAPP ကြားနာမှုတက်ရောက်ခဲ့သည်။
တစ် ဦး က fuck ဆိုတဲ့ nutter ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲ။ စွဲလမ်းစေသောအရည်အသွေးများ၊ သူမကိုသူမအား nutter ဟုခေါ်သောသူသို့မဟုတ်သူမ၏ပညာရေးဆိုင်ရာကြားနေမှုကိုနှောက်ယှက်စေသောအဆင်မပြေသောအချက်များကိုထောက်ပြသူမည်သူမဆိုကိုတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
နီကိုးလ် Prause ၏မဖွယ်မရာသတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းခံရသူများ။